အမေရိကန် ကြက်သွန်နီစာစောင်က အဲဒီလို နောက်ပြောင်သတ်မှတ်လိုက်တာပါ။ Read more »
11/28/2012 05:53:00 PM
အမေရိကန်အပါအ၀င် နိုင်ငံပေါင်းစုံမှ တပ်သားအင်အား တစ်သောင်းကျော် ပါဝင်သော
Cobra Gold စုပေါင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအစီအစဉ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ လာမည့်နှစ်မှစ၍ သုံးကြိမ်ဆက်လေ့လာသူသုံးဦးစေလွှတ်ရန် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ စီရမ်ရိတွင် အမေရိကန်တပ်မတော်နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်မှ တာဝန်ရှိသူများ သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ကျွန်မယောကျာ်းလည်း အတူတူပါပဲ၊ ကျွန်မအိမ်ရှေ့ ဆိုင်ရှေ့မှာ NLD ပါတီဆိုင်းဘုတ်ထောင်ထားပါတယ်။ ကျွန်မတို့ NLD ပါတီဝင်တွေ အရင်တုန်းက ဘယ်လိုနေခဲ့ ရလည်းဆိုတာ အားလုံးလည်းသိကြမှာပါ. ထားပါတော့ ဒါတွေတော့ ပြန်မပြော ချင်တော့ပါဘူး။ အခုတော့ ရင်ဖွင့်ချင်တဲ့. အကြောင်းအရာတွေ၊ ဝန်ခံချင်တဲ့ အကြောင်းလေးတွေ ဖြစ်လာလို့ ပြောလိုက်ရတာပါ။ တစ်နေ့ပေါ့…
၂၇-၁၁-၂၀၁၂ ရက်နေ့ ၁၁၃၀ အချိန် ပျဉ်းမနားမြို့၊ ရွှေချီရပ်ကွက်ရှိ အောင်ချမ်းသာတည်းခိုခန်း၌ တည်းခိုနေသော ဦးလှကျော်(၅၀)နှစ်မှာ အိပ်ခန်းတံခါးပိတ်ထားပြီး နှိုးမရကြောင်း တည်းခိုခန်းမန်နေဂျာ ဦးဝင်းမြိုင်မှ အကြောင်းကြားသဖြင့် ပျဉ်းမနားရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသွားရောက်ပြီး သက်သေများနှင့်အတူ အခန်းတံခါးဖျက်ကာ ၀င်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ Read more »
အိမ်သာကျင်းထဲကို ဖုန်းဆင်းကောက်ရာမှ လူ ၃ ဦးသေဆုံးဆိုတဲ့ သတင်းကို ယနေ့ထုတ် ကြေးမုံ သတင်းစာမှာ ဖော် ပြထားပါတယ်။ မန္တလေးတိုင်း ငါန်းဇွန် မြို့နယ် ကမ္မရွာက ဦးချစ်လိုင်ရဲ့နေအိမ် မှာဖြစ်ခဲ့တာပါတဲ့။ Read more »
11/28/2012 01:45:00 PM
11/28/2012 01:33:00 PM
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆင်းရဲမွဲတေမှုလျှော့ချပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ရေးအတွက် စွမ်းအင်ပိုမိုသုံးစွဲဖို့ လိုအပ်နေကြောင်း၊
စွမ်းအင်ရင်းမြစ်တွေ အမြောက်အများရှိနေပေမဲ့ ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်တဲ့ အခြေအနေ မရှိဘဲဖြစ်နေကြောင်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့အခြေစိုက် ADB အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် က ပြောပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက် နေ့တွင် ကျင်းပ သွားရန် စီစဉ် နေကြောင်း အဆိုပါ ပွဲကို ဦးစီး ကျင်းပမည့် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာ အသင်းချုပ်မှ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးဇော်မင်းဦး က The Voice Weekly သို့ ပြောကြားသည်။ သက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာ နယ်ပယ်မှ ပညာရှင် များနှင့် လုပ်ငန်းရှင် များ ပါဝင် ဆွေးနွေးမည့် ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေကြမ်း ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ ကို Read more »
11/28/2012 12:26:00 PM
ကချင်ပြည်နယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းနှင့်
အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာ တည်ရှိပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံတို့နဲ့ နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသော
မြန်မာနိုင်ငံမှပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကချင်ပြည်နယ်မှာ တောတောင်ထူထပ်ပြီး တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့
၀င်ရောက်နိုင်တဲ့ ၀င်ပေါက်များစွာ ရှိတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
11/28/2012 10:34:00 AM
လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းရပ်တန့်ရေးအတွက် သပိတ် စခန်းတွေကို ည ၁၂ နာရီ ကျော် ရင် အဆုံးသတ်ပေးဖို့ အာဏာ ပိုင်တွေဘက်က ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့
လက်ပန်းတောင်းေ တာင် ကျော်ရွာဘက်က သံဃာအများစုရှိတဲ့သပိတ်စခန်းမှာ ရဲတပ်ရင်းေ တွနဲ့ သံဃာတွေ ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ Read more »
11/28/2012 09:32:00 AM
အီဂျစ်သမ္မတ မိုဟာမက်မော်စီက သူ့ကိုယ်သူ တိုးမြှင့်ပေးအပ်လိုက်တဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာဟာ အခြေခံအားဖြင့် ဆက်လက် တည်ရှိနေဆဲရှိ မှာဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းတရားသူကြီးတွေကို ပြောဆိုလိုက်ပြီးတဲ့ေ နာက် ထောင်နဲ့ချီတဲ့ သမ္မတကို ဆန့်ကျင်သူတွေဟာ ကိုင်ရိုမြို့၊ တာဟီ Read more »
11/28/2012 09:28:00 AM
နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့လယ်မှာ လက်ပန်းတောင်းေ တာ င် ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းပစ်ရေးအတွက် တောင်းဆို ဆန္ဒပြ သူတွေထဲက ဦးဆောင်သူ ၆
ဦးကို ဒီကနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ တရားရုံးတင် စစ်ဆေးပြီး အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ကို ဒီကနေ့ ပို့လိုက် ပါတယ်။ Read more »
11/28/2012 09:25:00 AM
ရခိုင်ပြည်နယ် လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ " ကုလ " စိုးရိမ် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လတ်တလော နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို အသိအမှတ်ပြုပေမဲ့လို့ မကြာခင်က ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ အထူး သဖြင့် မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ လူနည်းစုဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာ မူစလင်တွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို အကာ အကွယ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် Read more »
11/28/2012 09:22:00 AM
ဆီးရီးယားနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Idlib မြို့အနီးက သံလွင်ဆီ ထုတ်လုပ်တဲ့ စက်ရုံတခုအနီး အစိုးရက လေကြောင်းကနေ ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာက လူ ၂၀ ထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့ကြောင်း တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူတွေက ပြောပါတယ်။ နောက်ထပ် လူပေါင်း ဒါဇင်နဲ့ချီ ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေ ရခဲ့တယ်လို့လည်း
11/28/2012 09:20:00 AM
ရွှေတွင်းအလုပ်သမားများကိုမတရား လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များနှင့်အစောင့်ချထားခြင်း အစိုးရနဲ့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီး သဘောတူညီချက်နဲ့ ရမည်းသင်းမြို့ ကိုပြန်သွားကြတဲ့ မိုးထိမိုး မိ ရွှေတွင်းလုပ်သားတွေကို အာဏာပိုင်တွေက မူလ သဘောတူထားတဲ့နေရာကို ပို့ဆောင် မပေးဘဲ ရမည်းသင်းနဲ့ ဝေးလံ တဲ့နေရာက ရွာတစ်ရွာမှာ ထားလိုက်ပြီး လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေ အစောင့်ချ ထားလိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မုံရွာခရိုင်၊ လက် ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းဖို့အတွက် အရှိန်အဟုန်မြင့်တဲ့ အနေနဲ့ ဒီကနေ့မှာ မုံရွာက သံဃာတော်တွေအပါအဝင် ဒေသခံလူထု (၅၀၀)ကျော်ဟာ လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း လုံးဝဖျက်သိမ်းရေး အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီကို ဒီကနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ Read more »
11/28/2012 09:10:00 AM
၁၂ နှစ်အရွယ် သတို့သမီးနှင့်
၁၉ နှစ်အရွယ် သတို့သား တို့ရဲ့
မင်္ဂလာ အခမ်းအနားကို သတို့
သမီး ဖခင်နှင့် အစ္စလာမ်အဖွဲ့မှ ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးနောက် မလေးရှားနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း Kedah ပြည်နယ်မှာ ပြီးခဲ့သည့် အပတ်က ကျင်းပ ခဲ့ ပါသည်။မဟုတ်ကဟုတ်က
တွေလျှောက်လုပ်နေတာနဲ့စာရင် သူတို့ကို ပေးစားလိုက်တာက ပိုကောင်း ပါတယ်လို့
သတို့ သမီး ဖခင်ဖြစ် သူ Saad Mustafa က ဆိုပါတယ်။